Waa maxay sababta Dumarka Qaarkood uga kacsadan Dabada? | Gaaloos.com
Home » galmada » Waa maxay sababta Dumarka Qaarkood uga kacsadan Dabada?
Waa maxay sababta Dumarka Qaarkood uga kacsadan Dabada?
Haweenka waxaa caadi ah inay ka kacsadaan cambarka, waa wax dabiici ah, naagta marka ay nin u baahato waxay wax ka dareemaysaa cambarka laakin waxaa yaab ah inay futada ka kacsato haddaba maxaa laga wadaa kacsiga dabada dumarka?
Title: Waa maxay sababta Dumarka Qaarkood uga kacsadan Dabada?